मतभेदभन्दा मनभेद जोखिम : RajdhaniDaily.com sharethis
जीवहरूमध्ये मानिस विशिष्ट प्राणी हो । मानिसको मस्तिष्कअन्य प्राणीको तुलनामा निकै विकसित छ । उसले औपचारिक, अनौपचारिक एवं अनियमित शिक्षाबाट ज्ञान प्राप्त गर्छ । चेतनाको विकास गर्छ । मानिसमा तर्क शक्ति छ र उसले कार्य र कारणमा सम्बन्ध खोज्ने गर्छ । आर्जित एवं सञ्चित ज्ञान मानिसको सबैभन्दा ठूूलो शक्ति हो । यो शक्तिलाई उसले कहिले सदुपयोग गर्छ त कहिले दुरुपयोग । मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले व्यावहारिक जीवनमा घर, परिवार, नाता, गोता, इष्ट, मित्र, छिमेकी एवं अन्य व्यक्ति एवं व्यक्तित्वहरूसँग छलफल, बहस, अन्तत्र्रिmया, तर्क वितर्क आदि इत्यादि हुने गर्छ ।
यी फरक विचारहरू विनिमय गर्ने क्रममा वातावरण सधैं सौहार्दपूर्ण नहुन पनि सक्छ । हातका आंैलाहरू फरक भएजस्तै हरेक मानिसको स्वभाव, विचार वा चिन्तन पनि फरकफरक हुन्छ । त्यसैले, मानिसमा सहनशीलताको खाँचो हुन्छ । दूरदृष्टिको आवश्यकता हुन्छ । विचार आदानप्रदानका क्रममा कहिलेकाहीँ आफ्नो स्वाभिमानमा चोट पुगेकोे अनुभूति गर्न पुगियो भने मन भेदको सुरुवात हुने गर्छ । मनभेदका कारण जोसमा होस् नपुग्दा अनेक प्रकारका अपराधजन्य घटना घट्ने गर्छन् ।
मानिसमा सिर्जनात्मक शक्ति छ । ढुंगे युगदेखि आजमम्म आइपुग्दा आज मानिसकोे सामथ्र्य निकै विशाल भएको छ । उसले आफ्नो ज्ञान र श्रमद्वारा प्राकृतिक संशाधन र स्रोतलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै आएको छ । फलफूल र अन्य खाद्य सामग्री उत्पादन गरेको छ । आत्मरक्षा र अन्य निर्माण कार्यका लागि उसले अस्त्र शस्त्र बनाएको छ । रोगबाट बच्न मानिसले औषधिमूलोको आविष्कार गरेको छ । भौतिक सुविधाको विकास गरेको छ ।
विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेर आज संसारलाई एउटै गाउँजस्तो बनाएको छ । परन्तु, मानिसले जति भौतिक विकास गर्दै आयो त्यति नै मानिस बेचैन छ । समाज असुरक्षित छ । आजको समाजमा हिंसा, हत्या, वैमनस्य, रिसइबी, बेमेल बढ्दै गएको पाइन्छ । विकाससँगसँगै अन्तरदेशीय सम्बन्धमा पनि मनभेद बढ्दै गएको पाइन्छ । मानिस विवेकशील प्राणी भएर पनि आपसी मेलमिलाप, सद्भाव र सहनशीलताजस्ता मानवीय गुणहरू व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा हत्या, हिंसा, विभेदलगायतका सामाजिक समस्या व्याप्त छन् ।
मानिस विवेकशील प्राणी भएर पनि आपसी मेलमिलाप, सद्भाव र सहनशीलताजस्ता मानवीय गुण व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा हत्या, हिंसा, विभेदलगायतका सामाजिक समस्या व्याप्त छन्
मानिसजस्तै संसारका हरेक जीवजन्तुहरू पनि प्रकृतिमा नै पूर्णरूपमा आश्रित छन् । प्रकृतिमा जेजस्ता स्थल वा गुफा छन्, तिनीहरू त्यहीँ बस्छन् । फलफूल र जीवजन्तुको सिकारबाट आहार प्राप्त गर्छन् । अन्य बाह्य साधनको प्रयोग नगरी आफ्नै शरीरका अंगबाट आत्मरक्षा गर्छन् । कतिपय हिंस्रक छन् भने कतिपय अहिंस्रक । तर, मानिसमा जति मतभेद अन्य मानवेतर जीवजन्तुमा पाइँदैन । आज समाजमा अनेक प्रकारका घटना एवं परिघटना घटिरहेका छन् । सामाजिक अपराध बढिरहेका छन् ।
भरखरै संखुवासभामा मनभेदकै कारण आफन्तजनबाट एउटै परिवारका ६ वटा सदस्यहरूको हत्या भएको पुष्टि भयो । यसैगरी, कहिले श्रीमान्ले श्रीमतीको हत्या गरेको त कहिले श्रीमतीले श्रीमान्को हत्यालगायतका घरेलु हिंसाका घटना आइरहेका हुन्छन् । मनभेदकै कारण दाम्पत्य जीवनमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढिरहेका छन् । पारिवारिक कहल, असझदारी वा झंैझगडा सामान्यजस्तो भएको छ ।
अहिले नेपाली समाज लोकतन्त्रको खुला अभ्यासमा अगाडि बढिरहेको छ । मानिस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकारका विषय बढी मुखरित भइरहेको अवस्था छ । समाजले अधिकारका विषय उठाइरहेको छ । नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीलगायत सामाजिक संघसस्थाले पनि अधिकारका बारेमा आवाज उठाइरहेका छन् । वास्तवमा हाम्रो देशमा अधिकारका चर्का कुरा हुने तर नागरिक कर्तव्यको विषयमा छलफल भएको पाइँदैन । गोष्ठी, सेमिनारहरू भएको पाइँदैन । हरेक नागरिकले आआप्mनो कर्तव्य इमानदारीका साथ निर्वाह गर्ने हो भने मदभेद नै रहने थिएन । राजनीति, संघसंस्था, समाज एवं घरपरिवारका हरेकले आ–आप्mनो कर्तव्य निभाउने हो भने हरेक बेमलहरू न्यूनीकरण हुँदै जानेमा शंका छैन । तर, यसो हुन सकेको छैन ।
हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरूले मनभेद उत्पन्न गर्ने भाइरसका रूपमा व्यवहार देखाउने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली सरकारमा हुँदा एउटा भूमिकार प्रतिपक्षमा हँुदा अर्कै भूमिका खेलिरहेका छन् । सरकारमा हालीमुहाली गर्दा ठीक देख्ने र प्रतिपक्षमा गएपछि त्यही विषयलाई बेठीक देख्ने छेपारे व्यवहारले मुलुक तहसनहस भएको छ । सैद्धान्तिक आधारमा नभएर मनभेदको कारणले एउटै दलभित्रगुट, उपगुट र फुट भइरहेको छ । दलहरूको सत्ता शक्तिको मात र गैरजिम्मेवार हर्कतका कारण नेपाली राजनीति अत्यन्त गैरजिम्मेवार भएको छ । आपसी मनभेद, बदलाको भावना, सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने दुर्वचन, अमर्यादित भाषाशैलीका कारण मनभेदको दायरा बढ्दै गइरहेको अनुभूति हुन्छ । देउवा सरकार बनेको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्सम्म गठन हुन नसक्नुको पछाडि पनि गठबन्धन दलहरूको मनभेदले काम गरेको छ । तिनका स्वार्थले काम गरेको छ । योभन्दा लोकलाज के हुन सक्दछ ? योभन्दा बढी देश र जनताप्रति गरिएको बेइमानी के हुन सक्छ ?
लोकतन्त्रमा मानिसले वैचारिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने गर्छ । कोही प्रजातन्त्रवादी छन् । कोही राजतन्त्रवादी छन् । कोही आपूmलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरू छन् । कोही फरक विचारका अनुयायीहरू । राजनीतिक आस्थाका आधारमा एउटै परिवारभित्र पनि विभिन्न विचार र आस्थाका सदस्यहरू हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा यो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुन्दर पक्ष हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा परिवार वा समाजमा राजनीतिक वा सैद्घान्तिक मतभेदका कारण परिवार वा समाजमा अप्रिय घटना बिरलै हुने गर्छन्, जति आन्तरिक रूपमा उत्पन्न सानातिना मनभेदका कारणले हुने गरेका छन् । यसरी हेर्दा मतभेदभन्दा मनभेद अत्यन्त जोखिम देखिन्छ ।
विचार आदानप्रदानका क्रममा कहिलेकाहीँ आफ्नो स्वाभिमानमा चोट पुगेकोे अनुभूति गर्न पुगियो भने मनभेदको सुरुवात हुने गर्छ
मनभेदको सिर्जना शंका, लोभ, लालच, आवेग, रिसइबी एवं स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रा देशका राजनीतिक दल उल्लेखित स्वभावले ठूलो काम गरेको देखिन्छ । अहिले हरेक राजनीतिक दलभित्र मनभेद छ । एकले अर्कोको अस्तित्व मान्न नसक्ने मनभेदको संस्कृति हुर्किएको छ । फलतः एमाले र जसपाको पार्टी विभाजन पछिल्लो दृष्टान्त हो । हरेक व्यक्ति ‘मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज म गरुँ, मै बाचूँ मै नाचूँ अरू सब मरून् दुर्बलहरू’ भन्ने चिन्तनबाट ग्रस्त हुँदा मनभेद बढेको हो । राजनीतिक क्षेत्र, संघसंस्थाहरूमा यसले काम गरिरहेको छ । मानिसले व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र पैसाले मतभेदमा काम गरेको हुन्छ । रिस र अहंकार मतभेदको मेरुदण्ड हो । ‘रिसले आपूm खा, बुद्घिले अरू खा’ भन्ने लोकोक्ति त्यसै कहाँ प्रचलनमा आएको हो र ? मनभेदका कारण आजको समाज न त गान्धीजस्तो परोपकारी बन्न सकेको छ । न त बुद्ध जस्तो त्यागी र शान्ति प्रेमी ।
इतिहासमा पनि मनभेदका कारण अनेक घटना घटेको पाइन्छ । कौरव र पाण्डवको मनभेदका कारण महाभारतको युद्घ भयो । रामचन्द्रले १४ वर्ष वनवास जानुको पछाडि पनि राजा दशरथका श्रीमतीहरूको मनभेदले काम गरेको देखिन्छ । यसैगरी राम र रावणको बीचमा भएको युद्घमा रावणका आप्mनै भाइ विभीषणले रामको पक्ष लिएका हुनाले दाजुभाइबीच मनभेद भयो । फलतः विभीषणले आप्mना दाजुलाई छाडे । रामचन्द्रको पक्ष लिए । मनभेदबाट सिर्जित घटना अप्रिय हुन्छन् । ‘सत्य मेव जायते’ भनिन्छ । तर, सत्य तितो हुन्छ । सत्यको पछाडि लाग्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन अत्यन्त कम हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ । समाजमा पद र पैसाको आडमा आपूmलाई महान् ठान्नेहरूको संख्या बढ्दै छ । पाका उमेरका अग्रज भन्छन्, बैंस, सत्ता, शक्ति र संगतले मानिस अन्धो हुन सक्छ । यसो हुनुहुँदैन ।
अन्त्यमा, धन सम्पत्ति, बैंस, पद, पैसा, सत्ता सबै क्षणिक हुन् । हरेकले शान्ति, प्रेम, त्याग, सेवा, सदाचार, स्नेह, सहिष्णुता, सालिनता र सहयोगी भावनाको विकास गरांै । समयसँगै हराएर जान्छन् । टिक्दैनन् । त्यसैले असल आचरणको विकास गरौं । मनभेदले कसैलाई फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा बुझौं । तनावमुक्त जीवनयापन गरांै । क्षमाशील बनौं । उपकारी बनौं । अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने भावनाको विकास गरौं । मानिस विशिष्ट प्राणी हुनुको लक्षण व्यवहारले पुष्टि गरौं ।